Raysal wasaaraha oo ka warbixiyay safaradii Marka iyo Qoryooleey – idalenews.com
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa faahfaahin ka bixiyay safar shaqo oo uu ku tagay degmooyinka Marka iyo Qoryooleey ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Ra’iisal wasaaraha oo saxaafadda kula hadlay xafiiskiisa ayaa tilmaamay in safarkiisa uu ku soo dhammaaday guul, isagoona intaas ku daray in uu kulamo la qaatay dadweynaha deggan labada magaalo.
“Haddii aan ka warbiyo safarka aan ku tagnay Marka iyo Qoryooleey, wuxuu ahaa mid guul ku soo dhammaaday, waxaan la hadlanay dadka ku dhaqan magaalooyinkaa, waxaan aad ugu hambalyeynayaa shaqada adage e ay ciidamada xoogga dalk iyo kuwa AMISOM ee ah wada shaqeynta ay la leeyihiin bulshada ku nool labadan degmo si ay ammaanka u sugaan” ayuu yiri ra’iisal wasaaraha.
Wuxuu sheegay intii uu ku sugnaa magaalooyinkaas in uu la kulmay odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, “ Waxaa ii suurta gashay inaan la kulmo muwaadiniinta labadan magaalo waxayna ila wadaageen waayo-aragnimadooda”.
Ugu dambeyn, ra’iisal wasaaraha wuxuu sheegay in dowladdu aysan joojin doonin dadaalka ay ku gaarsiineyso dowladdnimada dhammaan gobollada dalka, isagoo meesha ka saaray hadalka beenta ah ee ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku sheeganayaan inay weerareen kolonyadii wadday Raysal wasaaraha markuu ku soo laabanayay magaalada Muqdisho.
Dhageyso: Qaramadda Midoobey oo Sheegtay In Degaanadi Laga Saarey Al-Shabab ay Ka Fulinayso Mashaariic kala Duwan.